Fihenan-danja - Cmoapi
COA of Cetilistat
COA of Orlistat powder
Azonao atao ny mividy pilina mavesatra lanja amin'ny fivarotana an-tserasera. Raha ny tanjonao dia ny hahavery pounds fanampiny noho ny hatavezina, azonao atao ny manamarina ny pilina mampihena ny lanjany （Orlistat / Cetilistat） amidy amin'ny Internet. Na izany aza, mety mila fanafody ianao noho ny torolàlana henjana ataon'ny FDA.
Raha mitady pilina mampihena ny lanjanao ianao dia tokony hiditra miaraka amin'ny CMOAPI raha hahazoana vokatra madiodio. Ny fitambaranay dia nahazo fiantohana tsara.
Miasa ve ny orlistat raha tsy mihinana tavy?
Raha tsy misy tavy ny iray amin'ny sakafo fisakafoanana, na raha tsy misakafo ianao dia tsy ilaina ny mihinana fatra orlistat.
Orlistat firy no raisiko isan'andro?
Orlistat dia matetika raisina in-3 isan'andro amin'ny sakafo lehibe tsirairay izay misy tavy (tsy mihoatra ny 30% ny kaloria amin'izany sakafo izany). Mety mihinana ny fanafody ianao na misakafo na maharitra adiny 1 aorian'ny fisakafoana.
Azonao atao ve ny manangona tavy rehefa mihinana Orlistat?
Orlistat dia manakana ny asan'ny lipase. Rehefa mihinana zava-mahadomelina ianao amin'ny sakafo, dia manodidina ny 25 isan-jaton'ny tavy hohaninao no tsy simba ary esorina amin'ny alàlan'ny tsinay.
Misy vokany ratsy ve ny orlistat?
Ny voka-dratsy ateraky ny orlistat dia matetika misy: ny mahamaika ny tsinay, ny fivezivezena matetika amin'ny tsinay, ny famindran-toerana amin'ny menaka, ny fanitsakitsahana ny lozabe, ny steatorrhea ary ny fivalanana.
Afaka mandray orlistat 2 indray mandeha ve ianao?
Ny Orlistat dia miasa ihany rehefa misy matavy amin'ny sakafo hohaninao, ka raha tsy misakafo ianao na mihinana sakafo tsy misy tavy dia aza mihinana fatra orlistat. Raha manadino ny fakana fatra ianao dia aza manahy; maka kapsily fotsiny miaraka amin'ny sakafonao manaraka toy ny mahazatra. Aza miaraka mandray fatra roa hanonerana ny doka hadino.
Iza no orlistat tsara kokoa na Xenical?
Ny mahasamihafa ny orlistat sy Xenical dia ny orlistat no kinova generika an'ny fanafody, raha marika Xenical kosa. Midika izany fa lafo kokoa ny Xenical noho ny Orlistat ary fantatra kokoa amin'ny takelaka mampihena. Xenical dia tokony horaisina amin'ny fomba mitovy amin'ny orlistat.
Afaka misotro amin'ny orlistat ve ianao?
Orlistat dia tsy mifandray amin'ny alikaola, noho izany dia azo antoka ny misotro alikaola rehefa mandray Orlistat. Na izany aza, ny alikaola dia be kaloria. Vokatr'izany, ny fisotroana alikaola rehefa mandray Orlistat dia mety hanakana ny dianao mihena. Raha mila torohevitra misimisy kokoa momba ny fomba mahomby amin'ny fampiasana Orlistat dia ampiasao ny sakafo Orlistat
Misy fiantraikany amin'ny fahavokarana ve ny orlistat?
Ao amin'ny vondrona orlistat, fanatsarana lehibe no hita tamin'ny mombamomba ny lipid tamin'ny faran'ny 3 volana. Ny taham-piterahana dia 40% sy 16.7% ary 3.3% amin'ny orlistat, vondrona metformin ary vondrona mpitantana (P - 0.003). Ny fihenan-danja dia hita fa ny vinavina tsara indrindra amin'ny ovulation miaraka amin'ny fahatsapana amin'ny fahatsapana tsara.
Afaka mandray orlistat indray mandeha isan'andro ve aho?
Ny fatra mahazatra dia kapsula iray - 120 mg, intelo isan'andro isan'andro isaky ny misakafo. Na izany aza, tsy mila maka iray ianao raha tsy misy tavy ao anaty sakafo na raha tsy misakafo ianao.
Ny orlistat ve dia miteraka fahasimban'ny aty?
Alli dia mifandraika amin'ny ratra amin'ny atiny mafy amin'ny tranga tsy fahita firy, na dia izany aza dia nitranga indrindra tamin'ireo izay naka ny doka ho an'ny hery (Xenical). Atsaharo ny maka Alli ary miantso ny dokotera eo noho eo raha sendra misy amin'ireo famantarana mety hanimba ny atiny ireo ianao.
Miakatra tosidra ve ny orlistat?
Orlistat dia mampiroborobo ny fihenan'ny lanjany ara-pahasalamana izay mifandraika amin'ny fihenan'ny tosidra sy ny tahan'ny fo, ary noho izany dia mety hanana anjara andraikitra amin'ny fitantanana ny fiakaran'ny tosidra amin'ny marary be loatra sy be loatra.
Ny orlistat ve mety hiteraka olana amin'ny voa?
Orlistat dia mpanakana ny lipase gastric sy pancreatic miaraka amin'ny fahombiazany voaporofo amin'ny fampitomboana sy fikojakojana ny fihenan'ny lanja. Na dia voafetra aza ny fampiasana azy amin'ny vokadratsin'ny gastrointestinal manahirana, dia vao haingana izy io no nifandray tamin'ny ratra voa mahery (AKI).
Manandevo ve ny orlistat?
Orlistat dia mpanakana ny lipase pancreatic ary manakana ny fitrohana tavy ao amin'ny lalan-dra. Satria tsy misy fiatraikany amin'ny rafi-pitabatabana afovoany, ny orlistat dia mety tsy manana toetra mampiankin-doha.
Nahazo fankatoavana ve ny Orlistat FDA?
Xenical (orlistat 120mg) dia nankatoavina ho toy ny vokatra natokan'i FDA tamin'ny taona 1999 ho an'ny fitantanana matavy loatra miaraka amin'ny fihinanana kaloria mihena, ary hampihenana ny mety hisian'ny lanjany aorian'ny fihenan'ny lanja teo aloha.
Ahoana no fandraisanao orlistat 120 mg?
Ny fatra mahazatra an'ny Orlistat dia kapsula 120 mg nalaina isaky ny sakafo telo lehibe isan'andro. Azo alaina eo noho eo alohan'izay, mandritra ny sakafo na adiny iray aorian'ny sakafo. Ny kapsily dia tokony hatelina rano.
Mety mahavita mitombo lanja ve ny orlistat?
Ny ankamaroan'ny fihenan-danja vokatry ny Orlistat dia mitranga ao anatin'ny enim-bolana voalohany amin'ny fihinanana fanafody. Raha manapa-kevitra ny hijanona tsy hampiasa Orlistat ianao amin'ny fihenan-danja, tokony hanohy hihinana ara-pahasalamana ianao ary hanao fanatanjahan-tena tsy tapaka. Na izany aza, mety hiaina lanja kely ianao aorian'io.
Ahoana no hahavitanao haingana ny lanja amin'ny orlistat?
Orlistat (anarana marika: alli) dia fanafody OTC eken'ny FDA izay afaka manampy ny olon-dehibe be lanja hampihena. Orlistat dia miasa amin'ny alàlan'ny fanakanana ny tavy tsy hiditra ao amin'ny vatana aorian'ny fihinanana azy mandritra ny sakafo. Manodidina ny 5 ka hatramin'ny 10 pounds eo ho eo no mety ho very mandritra ny 6 volana voalohany amin'ny fampiasana orlistat.
Maharitra hafiriana vao manomboka miasa ny alli?
Fotoana firy aorian'ny fisotroana kapsily alli® no tokony antenaiko ny hahita valiny? Raha manaraka sakafo ambany kaloria sy ambany tavy ianao, mahazo fampihetseham-batana tsy tapaka ary mandray kapsily alli® araky ny torolàlana dia afaka mahita vokatra ianao mandritra ny tapa-bolana voalohany. Ny ankamaroan'ny fihenan-danja matetika dia mitranga ao anatin'ny enim-bolana voalohany.
Manakana ny fahazotoan-komana ny orlistat?
Orlistat (Xenical) dia fanafody atolotry ny GP anao. Namboarina hanampiana ny fihenan-danja. Nasehon'ny fikarohana fa amin'ny alàlan'ny fampiasana Orlistat, miaraka amin'ny sakafo ara-pahasalamana sy fanatanjahan-tena, dia mihabe ny fihenan-danja. Tsy mahasolo ny sakafo sy ny fanatanjahan-tena izany ary tsy mahasakana ny fahazotoan-komana.
Tena mandeha ve ny orlistat?
Nasehon'ny fanadihadiana fa, amin'ny salan'isa, ny orlistat, miampy sakafo mampihena lanja sy fanatanjahan-tena dia miteraka fihenan-danja bebe kokoa noho ny sakafo mampihena lanja sy ny fanatanjahan-tena irery. Ny olona sasany very 10% na mihoatra ny lanjan'ny vatany ao anatin'ny enim-bolana miaraka amin'ny fanampian'ny orlistat. Amin'ny hafa, tsy dia misy vokany firy.
Ny orlistat ve dia mety miteraka pancreatitis?
Famaranana Ny tatitra ataonay dia milaza fa ny listlist dia mety miteraka pancreatitis maranitra voan'ny aretina sasany. Ho an'ireo marary mampiseho fanaintainana ao amin'ny kibo taorinan'ny hanombohany orlistat dia tsy maintsy dinihina ny aretina pancreatitis. Manoro hevitra ihany koa izahay ny fampiasana mailo ny orlistat amin'ireo marary atahorana ho voan'ny aretin-tratra.
Inona no fotoana mety indrindra handraisana orlistat?
Orlistat dia tonga toy ny kapsily sy kapsily tsy misy prescription horaisina am-bava. Matetika intelo isan'andro no maka azy isaky ny sakafo lehibe misy tavy. Makà orlistat mandritra ny sakafo na hatramin'ny adiny 1 aorian'ny sakafo. Raha tsy tratra ny sakafo na tsy matavy dia azonao atao ny miala amin'ny fatrao.
Ohatrinona ny lanja azonao very ao anatin'ny iray volana raha matavy be ianao?
Midika izany, amin'ny salan'isa, fa ny tanjon'ny famoahana lanja 4 hatramin'ny 8 pounds isam-bolana dia tanjona salama. Satria satria azo atao ny very be kokoa, farafaharatsiny amin'ny volana voalohan'ny sakafo dia tsy midika hoe salama izany na hijanona mandritra ny fotoana maharitra ny lanjany.
Fa maninona ny menaka volomboasary rehefa maka Orlistat?
Satria tsy dia matevina noho ny rano ny solika, dia hiseho ao anaty trano fidiovana ity hetsika tsinay ity toy ny menaka volomboasary mipetraka ambonin'ny rano. Ny olona sasany dia mety mamaritra ny fofon'ny keriorrhea toy ny an'ny menaka mineraly mahery. Indraindray, ny olona iray dia mety mandalo diky miaraka amin'ny menaka.
Inona no atao hoe Cetilistat
Cetilistat, fantatra amin'ny anarana marika Kilfat, Checkwt, Cetislim, Celistat no zava-mahadomelina vaovao.
Nahoana isika no mila cetilistat?
Ny hatavezina no aretina misakafo be indrindra manerantany. Mety tsy mahatsikaritra ny valiny amin'ny fampihetseham-batana sy ny sakafo madio ny rehetra; noho izany dia mety mila mampiasa Cetilistat hiadiana amin'ny hatavezina.
Ahoana ny fiasan'ny cetilistat?
Cetilistat dia miasa amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fihenan'ny tsiranoka sy ny fifohana ny tavy. Izy io dia amin'ny alàlan'ny fisorohana ny fiforonan'ny lipase pancreatic izay ny asany dia ny mamotika triglycerides ao amin'ny tsinay. Raha vantany vao tsy azo entina toy ny asidra matavy ao amin'ny vatana ny triglycerides, dia mivoaka ny fivoahana izy ireo.
Tombontsoa Cetilistat sy fatiantoka mavesatra
1. Manampy anao very lanja mitazona fomba fiaina ara-pahasalamana, manampy anao hitazona ny fahasalamana BMI.
2.Mba manome valiny ao anatin'ny fotoana fohy, omen'ny Cetilistat anao ilay vatana bikini ao anatin'ny roa ambin'ny folo herinandro.
Ahoana ny fampiasana Cetilistat
Matetika, ny vovoka Cetilistat dia amidy amin'ny endrika kapsôla 60mg izay raisina am-bava. Ny olona sasany dia aleony maka izany aorian'ny fotoam-pisakafoanana, fa tsy tokony hihoatra ny adiny iray aorian'ny fotoam-pisakafoanana ianao.
Tena mandaitra ve ny Cetilistat?
Cetilistat dia fanafody ihany koa amin'ny fotoana fohy ary mety tsy ny tsara indrindra hifehy ny lanjanao mandritra ny androm-piainanao. Raha ampiasaina mandritra ny fotoana lava be izy io, dia mety hiteraka fiankinan-doha ary koa olana amin'ny gastrointestinal.
Ny Cetilistat kosa dia hita fa mahazaka amin'ny fomba tsara kokoa raha oharina amin'ireo fanafody mampihena lanja hafa toa ny Orlistat.
Mihoatra ny 27 ny BMI anao, ary mijaly amin'ny fahasalaman'ny fahasalaman'ny olona toy ny fiakaran-dra sy diabeta ianao.
Ny ankamaroan'ny fiantraikan'ny Cetilistat dia misy gastro sy digestive tract mifandraika amin'izany.
Fampihenana ny haavon'ny vitamina E sy D, ny tsy fanjarian-tavy, fahamehana ny fahalavoana, fivoahana avy amin'ny rohy, seza matavy, seza misy menaka sns.
Inona no hitranga raha tsy misy ny doka ao Cetilistat?
Raha tsy nahavita fatra iray ianao, dia misy zavatra roa tokony hojerenao; manao ahoana ianao ary firy taona? Raha tsaroanao fa tsy nahavita fatra iray ianao, dia raiso fa vantany vao tsikaritrareo.
Raha tena akaiky ny fandaharam-potoananao manaraka, dia ariho ny fatra Cetilistat tsy hita ary tohizo ny fandaharam-potoananao. Aza mampiasa dosage fanampiny hanamboarana doka efa tsy hita, satria ity dia hitarika ho be loatra loatra. Raha tsaroanao ny fotoana hahatongavanao ny zava-mahadomelina atrehinao dia azonao atao ny mametraka ny fanairana na mangataka iray amin'ireo namanao na olona ao amin'ny fianakavianao mba hampahatsiahy anao.
inona ny fahasamihafana cetilistat sy orlistat？
Ny fitsaboana amin'ny orlistat dia misy ifandraisany amin'ny trangam-piterahana gastrointestinal (AE) izay miharatsy eo amin'ireo marary izay tsy manaraka ny sakafo matavy be. Cetilistat dia mpanakana ny lipase pancreatic sy gastrointestinal, ary miavaka amin'ny simika amin'ny orlistat.